We She Me: ဌာနေ ပြောင်းချိန်
sawphonelu - 7/31/07, 2:41 PM
ရေးအားတွေ သိပ်ကောင်းနေပါလား အန်ဒီ ။ ကိုယ်တို့ တော့ သာထက်အောင် ဆောင်းပါးတွေလို ဖတ်ရ တော့ မယ် ထင် တယ်။
Andy Myint - 7/31/07, 3:32 PM
imaginary clouds no2 - 8/1/07, 12:26 AM
အန်ဒီ အက်ဆေး မိုက်တယ် ။ ဟုတ်တယ် ကို စော ။ ကျနော်လဲ အတော်ကို ရောက်ပြီး ပေါက်နေတယ် ။ နောက်တာပါ ။ ဇာတ်က ပြန် စတော့ မှာကိုးဗျ ။
Andy Myint - 8/1/07, 11:50 PM
ဟိုက်ရှားဘား.. ကိုယ့်ဆရာ ပြောမှပဲ Essay များလားလို့။ တကယ်တော့ ရင်ထဲကပါ။ ဘယ်ကို သွားလဲ.. ခင်ဗျား သိပါတယ်။ (မန်းလေ ပြဲလေပါလားနော်)
Tun Myo Hlaing - 8/2/07, 3:07 PM
Yep, dude..let's move on for our good. Oh don't forget, 'Check before you move!'
Andy Myint - 8/2/07, 3:38 PM
Anonymous - 8/4/07, 3:17 PM
ကိုအန်ဒီရေ.. ညီမနားမလည်တဲ့ အချက်များစွာထဲမှာ.. လူတွေဟာ ရွှေမြို့တော်တွေဆီ သူတို့ပြောင်းတိုင်း ၊ အဲလိုပြောင်းနေမှ ဘ၀ကြီးကောင်းတယ်လို့ ဘာလို့ ထင်မြင်တတ်ကြပါလိမ့် ။
ညီမအတွက်တော့ ဘယ်မြို့ဖြစ်၂..လူတမျိုးစီဟာ ကိုယ်အလေးထားတဲ့အရာပေါ်လိုက်လို့ အဲဒီနေရာဟာ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ဖြစ်တယ်လို့ ခံယူပါတယ် ။ I believe in globalization of the future)
ဒါကြောင့် ခြသေ့င်္ကျွန်းထက် နောက်ထပ် မြင့်မားတဲ့ ရွှေမြို့တော်ကို မပြောင်းလဲလို့ မေးခံရတိုင်း ၊ ပြောင်းစရာလိုတယ် မထင်မိလို့ပါလို့ ဖြေမိပါတယ် ။
Andy Myint - 8/4/07, 4:45 PM
ရွှေမြို့တော်ကို ပြောင်းရင် တိုးတက်မယ်ဆိုတာ Common Perception (စင်္ကာပူ စကားနဲ့ဆို) လူတွေရဲ့ Mindset ပါ။ မြန်မာပြည်လို မြို့ကြီးနည်းနည်းမှာသာ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံမှာတော့ အထိုက်အလျောက်မှန်ပါတယ်။ ဒါကြောင်မို့ မြို့ပြပြောင်းရွှေ့မှုနှုန်းဟာ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ တိုးတက်လာတာပါ။ အရင်တုန်းက ဆေး၊ စက်မှု တက္ကသိုလ်တွေက ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမှာပဲ ရှိတုန်းက ပိုများပါတယ်။ အမေရိကားမှာတော့ တိုးတက်တဲ မြို့ကြီးတွေက များတော့ New York သွားမှ တိုးတက်တာ မဟုတ်ပြန်ဘူး။
မှန်ပါတယ် .... ရန်ကုန်လိုမြို့ကတော့ လယ်သမား မိသားစု အတွက် ရေကြည်ရာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်သလို ဆေးပညာ ဆည်းပူးမဲ့သူက ဖလမ်းမြို့ မှာ နေလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ခြင်္သေ့ကျွန်းလို ဗမာတွေ အတွက် အစစ အရာရာ အဆင်ပြေတဲ့ (နိုင်ငံခြား) တိုင်းပြည်က ရှားပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေ ရေုးဖြစ်ဦးမှာပါ။